Sonos nandefa PLAYBASE Vaovao ho an'ny "Cinema Sound" ao an-tranonao | Vaovao IPhone
Sonos nandefa PLAYBASE Vaovao ho an'ny 'Cinema Sound' ao an-tranonao
Sonos dia nanambara ny famoahana ny vokatra vaovaony antsoina hoe PLAYBASE, a foiben'ny feo mahatalanjona natao manokana hanomezana "feo sinema ho an'ny fahitalavitra sy mozika mivantana."
Araka ny voalazan'i Sonos, ilay dock-speaker vaovao, izay misy amin'ny loko mainty sy fotsy, dia a mpandahateny manify sy mahery izay apetraka eo ambanin'ny televiziona rehetra izay tsy mihoatra ny 35 kilao ny lanjany, manolotra fametrahana tsotra sy haingana, dia afaka ampifandraisina amin'ny vokatra hafa an'ny orinasa toy ny SUB sy PLAY roa: 1, ary manolotra feo nohatsaraina ho an'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra sy andiana, mozika ary sarimihetsikas.
1 PLAYBASE nataon'i Sonos, feo sinema ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny
PLAYBASE nataon'i Sonos, feo sinema ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny
Ny Sonos PLAYBASE dia tonga amin'ny tsara tarehy sy endrika kely indrindra amin'ny fotsy na mainty, milanja 8,6 kilao ary manana refin'ny 58 × 720 × 380 mm. Araka ny nolazaiko, miditra amin'ny maso ny vokatra; miaraka amin'ny vatana polycarbonate ary ny azy ireo tsipika madio tsy misy zaitra hita maso, ny PLAYBASE dia hifangaro amin'ny haingon-trano rehetra, raha manome a fanatsarana tsara ny kalitaon'ny feo.
Na dia zara raha mihoatra ny antsasaky ny sentimetatra aza ny hahavony, PLAYBASE dia manana mpandahateny mandeha anaty heriny folo (midrange enina, treble telo, ary bass iray) izay "manolo ny feon-tsofina voafetra ao anaty mpandahateny amin'ny fahitalavitra miaraka amin'ny fipoahana mafy, ny bitsibitsika ary ny onjampeo mafy."
Giles Martin, Sound Experience Leader ho an'i Sonos, dia nilaza momba ny famolavolana vokatra vaovao fa "Nanangana vokatra izahay izay tsy afaka hiatrika ny fahasarotan'ny teatra an-trano ihany, feo misokatra sy voajanahary, fifanakalozan-kevitra mazava sy bass immersive mameno ny efitrano, nefa koa mifanaraka tanteraka amin'ny tontolo an-trano. Ny fanamby amin'ny PLAYBASE dia ny hitazonana ny faniriana ho tsara tarehy avy amin'ny lafiny rehetra izy io, nefa tsy manimba ny endrikay, ny acoustika na ny foto-kevitra momba ny injeniera. Izahay dia variana loatra amin'ny fomba fiasa sy ny fanapaha-kevitra, manohitra ny faniriana hanangona zavatra eto izay tsy ilaina ary manamboatra ny zavatra hafa rehetra hahitana izay mety indrindra, izany dia ny mpandahateny tsara indrindra sy tsara indrindra. "
Ny PLAYBASE dia natao manokana ho an'ny fahitalavitra mipetaka amin'ny jiro na fanaka, raha tokony ho eo amin'ny rindrina.
Ny bara fanamafisam-peo mahazatra dia mety indrindra rehefa apetaka amin'ny rindrina, eo ambanin'ny fahitalavitra. Saingy saika ny fahitalavitra rehetra dia miorina amin'ny fijoroana na fanaka. PLAYBASE dia noforonina tao an-tsaina io. Noho ny endriny malina sy kanto, dia manjavona eo ambanin'ny fahitalavitra izy. Na izany aza, fenoy fefy teatra an-trano mahavariana ny efitrano iray manontolo fa tsy te halahelo ianao.
Ny sarimihetsika, ny fampielezam-peo, ny fandaharana amin'ny fahitalavitra, ny lalao video ... PLAYBASE, miaraka amina endrika malina sy kanto, dia manome feo mavitrika sy lalina ho an'ny zavatra hitanao amin'ny fahitalavitra rehefa novahana izany. SAINGY milalao ny mozika ankafizinao koa izy io rehefa novonoinao ny fahitalavitra.
Su haingana sy mora ny fifandraisana satria tariby roa fotsiny no ampidiriny, tariby misy herinaratra ary tariby optika izay mifandray amin'ny fahitalavitra; inona koa, mifandray amin'ny mpandahateny Sonos hafa manome vahaolana feno amin'ny trano manontolo. Ary toy ny vokatra Sonos rehetra, dia azo ampiasaina amin'ny serivisy mozika 80 mahery, ao anatin'izany, mazava ho azy, Apple Music.
PLAYBASE dia mamelona sarimihetsika, fampielezana fanatanjahan-tena, lalao video ary mozika ao amin'ny efitrano iray. Manampia mpandahateny Sonos bebe kokoa ary henoy ny feon'ny fahitalavitra amin'ny efitrano rehetra.
Manampy SUB sy PLAY roa: 1s ho toy ny mpandahateny aoriana manome anao feo 5.1 manodidina anao.
Sonos dia hanomboka hivarotra ny PLAYBASE amin'ny 4 aprily 2017 amin'ny vidiny izay tsy mety amin'ny paosy rehetra 799,00 euros. Araka ny efa natoroko azy dia ho hita amin'ny faran'ny roa, fotsy na mainty. Afaka mitsidika ny tranokala Sonos ianao izao ary misoratra anarana mba hampandrenesina rehefa misy ny PLAYBASE amin'ny fahazoana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Sonos nandefa PLAYBASE Vaovao ho an'ny 'Cinema Sound' ao an-tranonao
Steve Jobs dia tsy nankafy ny Genius Bars tao amin'ny magazay ara-batana tamin'ny voalohany